SIDA LOO ISTICMAALO COWS SIDA BACRIMINTA - SOOSAARKA DALAGGA
Qaababka isticmaalka caws sida bacriminta
Maanta, caws buu u yahay bacriminta beerta waxaa isticmaala beeraley badan.
Aan aragno waxa cawsku yahay iyo sababta ay u adeegsanayso bacriminta waa mid aad u badan?
Tilmaanta iyo halabuurka
Straw waa la qalajiyey caws dhir ah oo aan lahayn caleemo iyo ubax. Waxaa loo qaybiyaa qaybo yar oo ku xiran waxa cawska laga helay. Ma tixgelin doonno dhammaan noocyada, laakiin waxaan diiradda saari doonaa sarreen, shaciir, caano iyo digir.
Qamadiga waxaa ka mid ah qoysaska firileyda waana mid ka mid ah dhirta ugu muhiimsan ee loo isticmaalo cunto karinta ee dalal badan oo adduunka ah. Waxyaabaha kiimikada ah ee cawska dhoobada waxaa ka mid ah walxaha sida magnesium, birta, zinc, iodine, sodium, manganese, cobalt, iyo sidoo kale fitamiin D iyo carotene. Bukaanku sidoo kale waxaa ku jira fitamiinada B1-B4, B6 iyo B9.
Caleemaha qalalan ee shaciirku waxay ku badan yihiin kalsiyum, fiber, fosfooraska, potassium, magnesium, iodine, birta iyo sodium. Waxaa intaa dheer, waxay leeyihiin borotiin, lysin iyo walxaha dabeecada noolaha.
Ma taqaanaa? Fiitamiinada iyo macdanaha laga helo xabuubka ayaa si fiican loo soocay marka loo eego kiimikada.
Barley waxaa ku jira borootiin badan. Dhaqanka lo'da ayaa ku badan fitamiinada sida D, A PP iyo E.
Maydka ayaa ku koray dalal badan oo adduunka ah labadaba nafaqada iyo nafaqada dadka. Cawska dhirta lagu qalajiyo waxaa ku jira nafaqooyin badan oo u wanaagsan beergooyska, sida borotiinka, birta, cobalt, potassium, carotene, iyo waxyaabo kale oo badan.
Dhamaan walxahan waxay ka caawiyaan dhirta inay helaan qadarka macquulka ah ee macdanta oo aad muhiim u ah soo bixitaanka dalag goosasho ah.
Beeraha - dhirta fuulidda sanadlaha ah. Cawska qallalan ee digirta waa qani ku ah lysin, fiber iyo borotiin, waxa kale oo uu leeyahay walxo badan oo raad leh, sida fosfooraska, kalsiyum, magnesium iyo kuwo kale.
Intaa waxaa dheer, digirta ayaa hodan ku ah ascorbic acid iyo fitamiinnada kooxda B, E, H, PP. Peasku waa kuwo aan loo meelayn karin sababtoo ah xaddi badan oo ka mid ah antioxidants ku jira.
Aan aragno sida cawsku u saameeyo ciidda iyo dhalidda. Ka fiirso shay kasta si gooni ah.
Bacriminta dabiiciga ah sidoo kale waxaa ka mid ah digirta caanaha, cuntada lafaha, cuntada kalluunka, caanaha cagaaran, diirka baradho, compost, qolofta ukunta, maqaarka muuska, diirka basasha, marada, dhuxusha.
In ciidda inta lagu guda jiro decomposition, cawska la qalajiyey soo noqdaan carbohydrates fudud iyo xeryahooda borotiinka. Dheecaan dheeraad ah ayaa loo geliyaa lysine iyo cellulose. Straw decomposes ee ciidda si dhakhso ah, nitrogen badan ee dhulka.
Sidaa darteed, waxaa fiican in la isticmaalo cawska la qalajiyey si ay u kobciyaan dhulka leh Bacriminta nitrogen. Qiyaasta waa sida soo socota: 10-12 kg halkii 1 tii caws. Si aad this miira googooyaa xitaa dhakhso, waxaa fiican inaad ku darto digada si. Tani waxay kor u qaadaysaa waxqabadka sheybaarka, taas oo macnaheedu yahay in geedi-socodka qallafsan uu bilaabmayo inuu sii socdo si xeeladeysan.
Qodobka cawska qallalan wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa nidaamka asaasiga ah ee dhirta, maaddaama natiijooyinkani ay sameeyaan qaabab, baasiin, laktik, acetic iyo asiidh kale oo soo galaya dhulka, taas oo ka hor imaanaysa horumarinta xididdada dhirta.
Si kastaba ha noqotee, adoo ku daraya nitrogen-ka, saameynta xun ee dhirta ayaa la tirtirayaa. Iyadoo ay sabab u tahay tirada badan ee macdanta, cawska qallalan ayaa si deg-deg ah u duminaya, maadaama ay lagama maarmaan u yihiin labada nooc ee dhirta iyo dhirta sare.
Qodobka fosfooraska ee cawska qallalan wuu hooseeyaa, sidaa daraadeed ma saameynayo ciidda guud ahaan. Aan taabanno meesha qallalan ee la isku qalajiyey ee qasacadaha iyo firileyda loo isticmaalo qaabkooda saafi ah.
Isticmaal cawska saafiga ah
Caanaha waxaa lagu quudiyay geedo qallalan. Sababtoo ah xaqiiqda ah in badeecadaani tahay mid nafaqo leh, waxaa la siiyaa sida dharka ugu sareeya. Si aad u nuujiso, caleemaha qalalan ayaa ah dhulka, lagu daaweeyo kiimikada (lime, ammonia, iwm) ama caadka.
Goolasha caws ee ay la socoto cawska la qalajiyey oo la isticmaalo ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Cawska dhirta ee dhirta waxaa loo isticmaalaa gogosha.
Waxa kale oo ay u fiican yihiin samaynta mashiinka iyo saqafyada. Matxafyo badan oo dalka ka mid ah, caws ayaa loo isticmaalaa in lagu daboolo saqafyada (Matogovo matxafka hawada ee Kiev).
Isticmaal kale oo qalafsan oo la isku qalajiyey ee firileyda iyo digirta ayaa ah biofuel. Waxaa sidoo kale lagu cadaadiyaa kalluumeysiga shidaalka.
Mararka qaarkood caws ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo warqad (tusaale, muuska). Laga soo bilaabo waxay ka sameeyaan dambiilayaal iyo shabaq.
In dhismaha, caws loo isticmaalo si loo abuuro blocks blocks.
Intaa waxaa dheer, dumar badan oo raba inay jecel yihiin inay xirtaan koofiyadaha cagaarka. Waxa kale oo ay ka samaysan karaan farshaxanka cows. Isticmaalka cawsku waa mid fara badan, laakiin waxaan diiradda saari doonaa isticmaalka warshadaha beeraha, taas oo ah, abuurista bacriminta.
Diyaarinta bacriminta straw
Isticmaalka cawska sida mulch iyo bacriminta si ballaaran loo isticmaalo. Neefsashada waxaa loola jeedaa "macno ahaan" hoy. " Tani waxaa loo sameeyaa si aanay dhulka u dhicin, oo qoyaanka loo ilaaliyo.
Waa muhiim! Mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee cuuryaan cawska ah waa ilaalinta dhirta ka dhanka ah cayayaanka iyo cudurada.
Intaa waxaa dheer, mulching hoos u dhigi ama xitaa blocks koritaanka haramaha. Sidoo kale bacriminta mulchka waxay kordhisaa xaddiga wax soo saarka beeraha. Qaab dhismeedka carrada waa uu hagaajiyaa, dhulku wuxuu noqonayaa mid dabacsan oo jilicsan.
Saamaynta qorraxda iyo roobka, dhulku wuxuu lumiyaa qadar badan oo nafaqooyin, mulching wuxuu ka hortagaa. Waxaa sidoo kale jira hab: isticmaalka cawska qalalan sida bacrimin ah.
Ka hor inta beerta cawska la qalajiyey ee qasacadaha iyo firileyda dhulka, waa in si fiican loo burburiyaa. Dhererka la rabay ee dhirta la qalajiyey waa in aan ka badnayn 10 cm (75%) iyo 15 cm (aan ka badnayn 5%).
Straw sida bacrimin ah loo isticmaali karaa barandhada, hadhuudhka, xididdo sonkorta, bagalka, karootada, bocorka, zucchini, watermelon.
Ka hor inta aan la samayn caws dhir ah oo dalaggu ka soo baxo iyo dalagyo dalagyo ah waxay ku biiraan nitrogen. Waxaa lagu soo bandhigay qaabka HOL, bacriminta cagaaran ama amooniyam oo heerkeedu yahay 1 mitir halkii 1 ha. Ka dib markii cawska la qalajiyey si siman u kala firdhiyey.
Waa in la xusuustaa in dhererka gooyuhu uusan ka badneyn 20 cm. Muddo ka dib, waxaad u baahan tahay inaad qoto dheereyso cawska la qalajiyey dhulka, laakiin ma sameyn kartid isla markiiba, sababtoo ah waxay si tartiib tartiib ugu fileysaa. Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay wakhti si ay u hayaan cawska qallalan ee la gooyey ciidda.
Natiijooyinka wanaagsan ee goosashada waxaa lagu heli karaa iyadoo la isku darayo dhirta qalalan iyo beerashada digada cagaaran. Ka dib markii la qalajiyo cawska qalalan, siderats waxaa lagu beeray. Tani waxay siinaysaa ciidda ilo dheeri ah oo ka mid ah arimaha organic.
Intaa waxaa dheer, bacrimin this macdanay caws engegan ee firileyda iyo digirta, taas oo sidoo kale saameyn doonaa tayada dalagga.
Waa muhiim! Isticmaalka cagaarka cagaaran iyo caws engegan ayaa saameyn ku yeelan doona goosashada dalagyada xilliga qaboobaha.
Oo weliba, aynu ogaanno: caws buu beerta keenaa faa'iido ama waxyeelo?
Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
Helitaanka waxaa ku jira cawska cawska oo aan daneynin beeraha warshadaha, sidaa daraadeed looma isticmaalo, laakiin sida bacriminta waa wax aan loo baahnayn.
Bacriminta Tani waa mid aad u fiican in la isticmaalo marka loo eego dufanka.
Qaadashada waqti yar iyo dadaal marka la barbar dhigo Bacriminta kale (tusaale, digada).
Qadar badan oo ka mid ah arimaha organic.
Kordhay xakamaynta dhulka.
Hagaajinta ciidda qoyaanka ee qoyaanka.
Dhulka dhul-beereedu wuxuu heystaa biyaha sii fiican, iyo walxaha waxtarka leh.
Cawska qallalan waxaa ku jira fiitamiino, maadooyin jidheed oo firfircoon iyo amino acids.
Cabbiraadda carbon-ka bacriminta this ka caawisaa in dheeraad ah "neefsiga" dhulka.
Gubista, qalajinta afkoda waxay kudartaa kaarar dheeraad ah, sababtoo ah dhirta cagaaran waxay koraan.
Ilaalinta dhulka ee qorraxda.
Markaad isticmaasho noocyo kala duwan oo cows ah waxay kordhisaa tirada raadadka raadadka, taasoo keeneysa dib u soo celinta dhulka oo dhan.
Noocyada xun ee isticmaalka bacrimin this:
Cayayaanka waxay ku dhici kartaa bacriminta, taas oo si xun u saameeysa horumarka iyo dhalidda dalagga.
Sumeeyaha, cawska qallalan ee firileyda iyo lowska waxay u beddelaan asidiin waxyeello u leh horumarinta dalagga.
Cawska qallalan waxaa ku jira jajabyo badan oo dabiici ah, kuwaas oo u baahan qiyaas aad u badan oo biyo ah.
Cawska qalalan ee firilayda si tartiib tartiib ah ayuu u burburiyaa, sababtoo ah walxadan faa'iido leh waxay heli doonaan dhirta muddo 3 ilaa 5 sano ah.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha ay ka kooban tahay cawska organic ayaa ka badan digada 3-4 jeer.
Si looga hortago saamaynta xun ee hirgelinta cawska la qalajiyey, waa inaad:
Dalbo bacrimin sanad walba.
Soo qaado caleemaha qalalan ee dhirta firida isla markiiba ka dib goosashada.
Ka dib markii codsiga Bacriminta firida, waxaa ugu wanaagsan in la beero digirta ama dalagyada la beeray.
Marwalba ogow qiyaasta cawska qallalan.
Xoqdo walxaha qalalan ee dhirta oo si siman u qaybiya dhulka la beero, sidaa daraadeed waxay si dhaqso ah u jimceheysaa waxayna siin doontaa waxtar dheeraad ah.
Ku dar nitrogen iyo dhulka madow oo ay la socdaan cawska la qalajiyey, sidaas darteed qiyaasta qallafsan ee cawsku waxay kordhin doontaa 30%.
Wax kasta oo ay ahayd, laakiin cawsku waa bacriminta dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee dhulka la beero ee ka dhigi doona beergooyskaaga hodanka ah iyo bacriminta ciidda sanado badan.